नागिनको लकडाउन डायरी : फ्यानले गरे तारिफ ! हेर्नुहोस २० तस्विर – ताजा समाचार
नागिनको लकडाउन डायरी : फ्यानले गरे तारिफ ! हेर्नुहोस २० तस्विर
काठमाडौं । जि टिभीको शो जमाई राजा बाट चर्चित अभिनेत्री निया शर्मा आफ्नो फोटो र भिडियोका कारण अहिले चर्चित छिन्। निया शर्मालाई उनको शुरुआती क्यारियरको समयमा स्किनिंग शैलीको कारण धेरै धम्की दिइएको थियो। तर समय परिवर्तन भयो र आज निया शर्मा टिभी जगतमा चर्चित अभिनेत्री मध्ये एक हुन् जसले आफ्नो सुन्दरता र सेक्सी शैलीका कारण प्रशंसक हरूको हृदयहरूमा शासन गरिरहेकी छिन ।
निया शर्माको कामको बारेमा कुरा गर्दा नियाले धेरै कार्यक्रम र वेब श्रृंखलाहरू गरिसकेकी छिन्। विक्रम भट्टको ट्युटेड १ र २ बाहेक निया शर्माले मोडलिङ पनि गरेकी छिन्। यस बाहेक उनी खतरो के खिलाडी रियालटी शो पनि सहभागी थिइन्। निया संगै उक्त सिजनमा उनीसंगै स्क्रिन पार्टनर रवि दुबे पनि थिए। दुईटैले जमाई राजा धारावाहिकमा सँगै काम गरेका थिए। निया शर्मा लाई हाल एकता कपूरको शो नागिन ४ मा कलर्समा देख्न सकिन्छ। कार्यक्रममा निया संगै बिग बास १३ की रश्मि देसाईको पनि अभिनय रहेको छ ।